Fajita အစားအစာ Prep ဖလား - ချက်ပြုတ်နည်းများ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူ 2016 အတွက်ကုန်ကြမ်းအကြံဥာဏ်များသိုလှောင်
ဖျက်စီးရမည့် hash browns များနှင့်ဘာလုပ်ရမည်နည်း
Fajita အစားအစာ Prep ဖလား
ဘယ်လောက်ပဲအလုပ်များနေပါစေကျွန်ုပ်တို့စားရ ဦး မယ်။ ဤ Fajita Meal Prep Bowls ကဲ့သို့သောရိုးရှင်းသောရှေ့သို့အကြံဥာဏ်များဖြင့်တစ်ပတ်လုံးအစာစားခြင်းအားဖြင့်ရေခဲသေတ္တာကိုဖွင့်ခြင်းဖြင့်ပန်းကန်ကိုဆုပ်ကိုင်နိုင်သည်။ သူတို့ဟာအရသာရှိပြီးကျန်းမာနေပြီး ၂၁ ရက်ပြင်ဆင်ချက်ကိုအတည်ပြုပြီးပြီ။
နေ့လည်စာသို့မဟုတ်ညနေခင်းသည်သင့်ကိုခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ထားသလား၊ ထမင်းစားဖို့ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးစိတ်ကူးတစ်ခုရဖို့မျှော်လင့်ကာရေခဲသေတ္တာရှေ့မှာရပ်ထားခဲ့မည်ဆိုလျှင်ဒါကသင်အတွက်စာရွက်ပါ။ ဘဝဟာအလုပ်များနေတဲ့အချိန်မှာ drive ကိုနှိပ်ဖို့အရသာရှိပြီးရိုးရှင်းလွယ်ကူပါတယ်။
Fajitas ဟာနေ့တိုင်းကျွန်ုပ်တို့အလွယ်တကူစားနိုင်ပြီးပျော်ရွှင်စွာစားနိုင်တဲ့ဟင်းလျာများထဲကတစ်ခုဖြစ်တယ်။ သူတို့ကအတွက်လုပ်ဖို့လွယ်ကူသော, အရသာနှင့်အတူတင်ဆောင်ပါတယ် မီးဖို , ရက်တွင် မီးဖိုထိပ် သို့မဟုတ်ပင် ကင်ပေါ်မှာ !
ဒီဗားရှင်းကိုကြက်ရင်သားနှင့်ဆန်နှင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအခြားအရသာရှိသောအရာများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ဤစာရွက်သည်အရသာရှိပြီးသင့်အတွက်ကောင်းသည်။ ဤစာရွက်သည်ညနေ ၆ နာရီတွင်ညစာအတွက်အဆင်ပြေစေသည်။ ဤမုန့်ညက်ကိုစာရွက်ပေါ်၌ခင်းပြီးချက်ချင်းသင်၏အကြိုက်ဆုံးထိပ်ဖျားများနှင့်အတူဖလားတွင်ချက်ပြုတ်နိုင်သည် (သို့) တနင်္ဂနွေနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင်တပတ်လုံးအရသာရှိသောအစားအစာများ (သို့မဟုတ်ရေခဲသေတ္တာထဲ၌ပင်ကြာရှည်) ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
ဒါတွေကိုရနိုင်တယ် ဒီမှာ prep prep ကွန်တိန်နာ ။
(သူတို့ဟာပြန်သုံးနိုင်သော၊ ပန်းကန်ဆေးစက်၊ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်လုံခြုံပြီးကောင်းစွာအေးခဲနေသော) ။
ဒီအစာတွေကိုတစ်ပတ်လုံးအစာအတွက်ပြင်ဆင်ရန်ကြက်၊ ငရုတ်ကောင်းနှင့်ကြက်သွန်နီများကိုညွှန်ကြားသကဲ့သို့ချက်ပြုတ်သည်။ မုန့်ညက် - prep ကွန်တိန်နာ ငါ၏အ Fajita ဖလားထုပ်ရန်။ ၎င်းတို့သည်မိုက်ကရိုဝေ့ (ဗ်) မီးဖို၊ အေးခဲစေခြင်း၊ သူတို့ဟာပေါ့ပါးပြီးအပြည့်အဝသယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်ပြီးသူတို့ဟာစျေးသိပ်မကြီးတဲ့အတွက်သူတို့ကိုငါစွန့်ခွာသွားမှာကိုငါမစိုးရိမ်ဘူး။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လတ်ဆတ်သောကုန်တယ်ကြက်သားကိုသံလွင်ဆီနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ရာသီကိုအသုံးပြုသည်။ သငျသညျထုပ်ပိုးရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပျက်လျှင် Fajita ရာသီ လက်တွင်သင်စာရွက်တွင်ဖော်ပြထားသောရာသီအစားသင်သုံးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားအချိန်မိနစ်အနည်းငယ်သက်သာစေလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်စူပါအလုပ်များသောရက်သတ္တပတ်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဒီစာရွက်ကိုရေခဲသေတ္တာထဲမှာလေးရက်လောက်ကြာအောင်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာအရက်သောက်ရင် yummy အစားအစာများအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါ။
အစားအစာတွေပြင်ဆင်ပြီးတာနဲ့ဆာဆာ၊ ဒိန်ခဲ၊ ဖြစ်နိုင်ခြေများသည်ဖလားများနှင့်အဆုံးမဲ့ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်နှစ်သက်သောမည်သည့်အရာကိုမဆိုထည့်ပေါင်းရန်လွတ်လပ်စွာခံစားရသည်။ လတ်ဆတ်သော Mango ဆော့စ် , slaw, ဖျက်စီး jicama ငါတို့ချစ်သောအနည်းငယ်အခြားသူများဖြစ်ကြသည်။
ငါသည်ဤစာရွက်ပူသို့မဟုတ်အအေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ပျော်မွေ့။ ငါကတော့အအေးဒဏ်ကိုပိုကြိုက်တယ်၊ ကျမခင်ပွန်းကအအေးပေးတယ်။ တစ်ခါတလေငါတို့တွေအဲဒီလိုစားတာမျိုး၊ အိမ်လုပ် tortillas သို့မဟုတ်အရသာရှိတဲ့လှည့်ဖျားဘို့ဆလတ်!
Fajita ဖလားတို့သည်ကြီးစွာသောဖြစ်ကြသည် ၂၁ ရက်ပြင်ဆင်ချက် အားလုံးအတည်ပြုပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဤအရာများသည် ၂၁ ရက်ကြာပြင်ဆင်မှုအစီအစဉ်နှင့်ကိုက်ညီစေရန်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းချက်ပြုတ်ပါ။ သင်၏ကွန်တိန်နာများကိုအသုံးပြုပါ။ သင်၏ဘောဇဉ်ပြင်ဆင်မှုကိုပြုလုပ်သည့်အခါဆန်အဝါရောင် ၁၊ ငရုတ်ကောင်း / ကြက်သွန်နီအစိမ်း ၁ နှင့်ကြက်သားနီတစ်ရွက်တို့ကိုတိုင်းပါ။ များအတွက် jarred Salsa ထွက်ဖလှယ် pico က de gallo ။ အရေအတွက်သည်အဝါရောင် ၁ (ဆန်)၊ အနီရောင် ၁ (ကြက်)၊ အစိမ်း ၁ (ဟင်းသီးဟင်းရွက်) + ၂ Tsp အဆီများဖြစ်သည်။ ဒိန်ခဲသို့မဟုတ်ထောပတ်သီး (အပြာရောင်)၊ သံလွင် (လိမ္မော်ရောင်) စသည့်အပိုများကိုထည့်သွင်းပါက၎င်းတို့ကိုသီးခြားရေတွက်ပါလိမ့်မည်။
တစ်ချိန်က prepped ဤဖလားရက်ပေါင်းများစွာရေခဲသေတ္တာထဲမှာစောင့်ရှောက်ပေမယ့်သူတို့လည်းလှပသောအေးခဲ! အေးခဲနေသောအပူရှိန်ကိုကာကွယ်ရန်အဖုံးဖွင့ ်၍ ၃ မိနစ်သို့မဟုတ်မိုက်ကရိုဝေ့ (ဗ်) လှန် (၃) မိနစ် (သို့) ပူသည်အထိဖွင့်ပါ။
Fajita ဖလား (အစားအစာပြင်ဆင်မှု)
ပြင်ဆင်ချိန်ဆယ့်ငါး မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်နှစ်ဆယ် မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်၃၅ မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၆ စားသုံးခြင်း စာရေးသူHolly Nilssonဤ Fajita Meal Prep Bowls ကဲ့သို့သောရိုးရှင်းသောရှေ့သို့အကြံဥာဏ်များဖြင့်တစ်ပတ်လုံးအစာစားခြင်းအားဖြင့်ရေခဲသေတ္တာကိုဖွင့်ခြင်းဖြင့်ပန်းကန်ကိုဆုပ်ကိုင်နိုင်သည်။ ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢၃ ခွက် ထမင်း၊ အဖြူသို့မဟုတ်အညို
▢1 ½ အလေးချိန်ပေါင် ကြက်ရင်သား3အကြောင်း
▢၄ ငရုတ်ကောင်း မည်သည့်အရောင်
▢¼ ခွက် သံလွင်ဆီ
▢တစ်ခု ဇွန်း ငရုတ်သီးမှုန့်
▢တစ်ခု လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ကြက်သွန်ဖြူအမှုန့်
▢တစ်ခု လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ဆားဆား
425 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှမီးဖို Preheat ။
ကြက်သားကို 1″ အပိုင်းပိုင်းခွဲပါ။ သံလွင်ဆီအရောအနှော၏ထက်ဝက်နှင့်ထိပါ။
ဒြပ်ထုစီထားသည့်ဒယ်အိုးတွင်ထားပါ။ ၂၀-၂၂ မိနစ်သို့မဟုတ် ၁၀ မိနစ်ခန့်အကြာတွင်ချက်ပြုတ်သည်အထိချက်ပြုတ်နိုင်သည်။
လိုချင်သော toppings နှင့်အတူအမှုတော်ကိုထမ်းရွက်သို့မဟုတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမုန့်ညက် prep ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာပါ။
ကွန်တိန်နာ (၆) လုံးကိုတင်ထားပါ။ ကွန်တိန်နာတစ်ခုစီတွင်½ခွက်ဆန်ကိုထည့်ပါ။ ဆန်၊ ကြက်သား၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ဒိန်ခဲနှင့်ဆလတ်များကိုကွန်တိန်နာများအကြားညီမျှစွာခွဲပါ။
လိုချင်သော toppings နှင့်တံဆိပ်ခတ်နှင့်အတူထိပ်တန်း။4ရက်အထိရေခဲသေတ္တာသို့မဟုတ်အေးခဲ။
အပူပေးရန်အတွက် ၂.၅ မိနစ်မိုက်ကရိုဝေ့ (သို့မဟုတ်အေးခဲလျှင် ၃.၅ မိနစ်) ။
* ကယ်လိုရီကို optional toppings မပါဘဲတွက်ချက်ကြသည်။
သော့ချက်စာလုံးfajita ဖလား သင်တန်းညစာ ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုကော်ပီကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝပိတ်ပင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။
အနှေး cooker ကြက်သား Tacos